July 1, 2019 - Update New
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ လာမယ့် ၄၈ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန်
July 1, 2019 Mg Naing 0
မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှ လာမယ့် ၄၈ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်းငယ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အ‌ခြေအနေ။ ယနေ့မြန်မာစံတော်ချိန် (၀၆:၃၀) နာရီအချိန်တိုင်းထွာချက်များအရ ယမန်နေ့က ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့မြောက်ပိုင်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသော လေဖိအားနည်း ရပ်ဝန်း (Low Pressure Area) သည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ အဆိုပါ လေဖိအားနည်းရပ်ဝန်းသည် ပိုမိုအားကောင်းလာကာ […]
” နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့သာ နာကြပါ​တော့ခမျာ ” “ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်အုပ်ထားရမယ့်နိုင်ငံ” နည်းနည်းတော့ကြမ်းချင်ကြမ်းလိမ့်မယ်ဒါပေမယ့် ရေးရမှာပဲ ၃တန်းအရွယ် ၄တန်းအရွယ်၁၀နှစ်ပတ်ချာလည်ယောက်ျားလေးတွေဟာSex movies ကြည့်တတ်နေပြီဆိုရင်သင်ယုံပါ့မလား…. အလယ်တန်းကျောင်းသားအရွယ်မှာအိမ်ကအကိုတွေ ဦးလေးတွေရဲ့ညစ်ညမ်း စာအုပ်တွေကိုကျောင်းကိုယူလာပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့မျှဝေဖတ်နေကြပြီဆိုသင်ယုံမလား…. ဒါတင်မကသေးဘူး… အိမ်ကလူကြီးတွေ ဒါမှမဟုတ် တခြားလူကြီးတွေရဲ့လိင်ဆက်ဆံမှုတွေကိုအမှတ်တမဲ့မြင်ဖူးတယ် တွေ့ဖူးတယ်ကျောင်းမှာအချင်းချင်းထိုကိစ္စတွေကိုပြောဆိုနေကြတယ်ဆိုတာသင်ယုံပါ့မလား…. အဲဒီအရွယ်လေးတွေမှာသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ အသက်အရွယ်ပိုကြီးတဲ့ယောက်ျား/မိန်းမတွေရဲ့ သားကောင်ဖြစ်သွားနိုင်သလိုရွယ်တူအချင်းချင်းလည်း […]
စာသင်ကျောင်းအတွင်း ပထမဆုံး food box ထားရှိပေး
စာသင်ကျောင်းအတွင်း ပထမဆုံး food box ထားရှိပေး ဆာလျှင်ယူစား ကုသိုလ်လိုချင် လှူသွား ဆိုသော food box အား စာသင်ကျောင်းအတွင်းမှာ ပထမဆုံးထားရှိခြင်း အနေဖြင့် မြဝတီမြို့နေ ကိုစိုင်းစိန်လင်းထက် + မသန္တာလှိုင် ၊ သမီးလေး မမြတ်သီရိဇော် GRADE-6-A ၊ […]
မီတာခတိုးသဖြင့် လုပ်ခလစာတိုးပေးရန် အလုပ်သမားများတောင်းဆို
မီတာခတိုးသဖြင့် လုပ်ခလစာတိုးပေးရန် အလုပ်သမားများတောင်းဆို မြန်မာနိုင်ငံတ၀န်း ဇူလိုင် ၁ ရက်ကစတင်ပြီး လျှပ်စစ်မီတာခတွေ အစိုးရက တိုးမြှင့်ကောက်ခံမယ့် ကိစ္စဟာ အခြေခံ အလုပ်သမားတွေအတွက် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေတယ်လို့ အလုပ်သမားတွေက ပြောပါတယ်။ မီတာခနှုန်းထားတိုးမြင့်လာတဲ့နည်းတူ လုပ်ခလစာတွေလည်း တိုးမြှင့်လာစေဖို့အတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရမှာ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကို မီးမောင်းထိုးပြတဲ့ အနေနဲ့ ”လစာမတိုး […]
Live လွှင့်ပြီး ပရိသတ်တွေကို Update သတင်းလေးတစ်ခု ပြောပြခဲ့တဲ့ နေတိုး (ရုပ်သံ)
Live လွှင့်ပြီး ပရိသတ်တွေကို Update သတင်းလေးတစ်ခု ပြောပြခဲ့တဲ့ နေတိုး (ရုပ်သံ) အားလုံးရဲ့ အချစ်တော် နေတိုးက ပရိသတ်တွေကို ရင်ခုန်အောင် လုပ်လိုက်ပြီး ပရိသတ်တွေကို သတင်းတစ်ခု ပြောပြဖို့ ရှိတယ်လို့ မနေ့က သူ့ရဲ့ facebook page မှာ နေတိုးကတင်ထားခဲ့ပါတယ်။ […]
နေပြည်တော်အမှုက တရားလိုကလေးမိဘတွေအပေါ် အထင်အမြင်မလွဲဖို့ ပြောလိုက်တဲ့ ပန် ဆယ် လို
နေပြည်တော်အမှုက တရားလိုကလေးမိဘတွေအပေါ် အထင်အမြင်မလွဲဖို့ ပြောလိုက်တဲ့ ပန် ဆယ် လို ဘယ်သူ့ကိုမှ စိတ်ဆိုးလို့ ရေးတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အားလုံးဟာ အမှုမှန်ပေါ်စေချင်လွန်းလို့ မချင့်မရဲ ပြောမိတယ် ဆိုတာကို လည်း နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးမိဘတွေအပေါ် အထင်အမြင်မှားမိမှာစိုးလို့ ရေးတာပါ။ ဒီကျောင်းမှာတောင် ထားနိုင်တာ၊ […]
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံခဲ့ရကြောင်းပြောပြလာတဲ့ နေခြည်ဦး
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်က လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံခဲ့ရကြောင်းပြောပြလာတဲ့ နေခြည်ဦး မိန်းကလေး ပရိသတ်များရဲ့ အချစ်တော်၊တစ်ယောက်ဖြစ်သလို Beauty By Naychi ရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်တစ်ဦးဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်တယောက်လည်း ဖြစ်လာတဲ့ နေခြည်ဦးကတော့ သူ ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တုန်းက လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အစော်ကားခံခဲ့ရတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ “နေခြည် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင် နေခြည် ၁၂ […]
သက်ငယ်မုဒိမ်း ကို ပုံဖော်ပြီး MYANMAR GOT TALENT ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ VIDEO FILE လက်ရှိ့မြန်မာနိုင်ငံမှာ သက်ငယ်မုဒိမ်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြည်သူလူထုသာမက အနုပညာရှင်များကပါ တက်ညီလက်ညီ မုဒိမ်းမှု့ ကျူးလွန်သူကို ဖမ်းမိဖို့ အရေး ဆောင်ရွက်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုတွေကလည်း ပိုပိုများလာပြီး သမီးမိန်းကလေး မွေးထားတဲ့ […]
ထိုင်း ချဲလ်(၃) လုံးထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု (ကံကောင်းကြပါစေ)
ထိုင်း ချဲလ်(၃) လုံးထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု (ကံကောင်းကြပါစေ) လောကီပညာကို လိုက်စားကြသော မြန်မာဆရာများ၌ တစ်ခါတစ်ရံ ဆရာဆရာအချင်းချင်း ပညာကို ဖလှယ်သော အလေ့အထ ရှိတတ်ကြ၏။ထိုသို့ တစ်ဦးအား ပေးအပ်ကာ လဲလှယ်ကြရာ၌ ရှေးဦးစွာ`မိမိရှာဖွေတတ်သိထားသမျှ ပညာရပ်များတွင် အကောင်းဆုံးနှင့် ကိုယ်တွေ့မှန်ကန်သော ပညာများကိုသာပေးပါမည်။မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံ၍ ပေးခဲ့မိလျှင် […]
WISDOM HILL မူကြိုကျောင်းမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ သမီးလေး ဗစ်တိုးရီယား အတွက် အဆိုတော်လင်းလင်း ပွဲကြမ်းပြီ
WISDOM HILL မူကြိုကျောင်းမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ သမီးလေး ဗစ်တိုးရီယား အတွက် အဆိုတော်လင်းလင်း ပွဲကြမ်းပြီ Wisdom Hill မူကြိုကျောင်းမှာ အဓမ္မပြုကျင့်ခံရတဲ့ သမီးလေး ဗစ်တိုးရီယား အတွက် လင်းလင်းက ခုလို Post တင်ထားပါတယ်“ဗစ်တိုးရီယားလေးအတွက် ဗစ်တိုရီးယားများစွာက ဝိုင်းဝန်းကြတာပါ။ ဝိုင်းတွန်းကြတဲ့ဒီအရွှေ့ ရွေ့ကို […]